Global Voices teny Malagasy » Fihemorana Erantany: “Ny Andalam-pandrosoana, Tsodrano Iray Vonjimaika” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Aogositra 2018 4:58 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika (fr) i Anne Lozac'h, imanoela fifaliana
Sokajy: Albania, Indonezia, Iràna, Kazakhstan, Laos, Fampandrosoana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana
Milaza ireo governemanta sasany fa tsy voakasiky ny krizy ara-toekarena erantany  ny firenen'izy ireo. Amin'ny ankamaroan'ny fotoana, tsy maharesy lahatra izy ireo ; ary tsy mino ny mpifidy azy ireo, amin'izay voalaza fa fihatsaràn'ny toekarena. Saingy mety milaza ny marina ny sasany amin'ireo governemanta ireo. Angamba tsy mahatoky tanteraka izy ireo amin'ny sehatra ara-toekarena tena misy eo amin'ny fireneny, saingy angamba, manana ny marina izy ireo raha toa manambara fa tsy voakitik'ilay krizim-bola atahorana ny tanin'izy ireo, ny ‘fidangan'ny vidin'ny trano ‘ [amin'ny teny anglisy] sy ireo maripamantarana hafa amin'ny krizy.
Ahoana no hampety an'izany? Ireo firenena manana toekarena madinika sy ireo firenena izay tsy misokatra akory amin'ny tontolo ivelany amin'ny ankapobeny dia tsy hafa fa ireo firenena izay manamafy fa tsy nahakitika azy ireo ny krizy ara-bola, hatreto aloha. Mitanisa ohatra vitsivitsy ity lahatsoratra ity:
Araka ny lahatsoratra tao anaty blaogin'ny Banky Iraisampirenena natokana ho an'i Azia Atsinanana dia tsy niaritra be ny krizy ara-toekarena i Laos noho ny “toekareny tsotra “
Toekarena tsotra no azo anoharana ny toekaren'i Laos, mifototra amin'ny fambolena sy ireo harena voajanahary, na eo aza ny fiakarana tsy mitsahatra avy amin'ny orinasa momba ny harin-karena faobe (PIB) tamin'ireo folo taona farany. Hatreto, tsy dia tratry ny krizy loatra i Laos raha oharina amn'ireo firenena hafa, noho izy firenena andalam-pandrosoana sy ny somary fikatonan'ny toekaren'ny firenena, ireo loza miharihary hita ho toy ny fitahiana mifangaroharo.
Tao anaty lahatsoratra teo aloha, notanisaiko ny toekarena laosiàna  izay manamafy fa ho tafavoaka velona amin'ilay krizy i Laos noho ny toekareny miankindoha amin'ny fambolena.
Miankindoha tanteraka amin'ny fambolena i Laos. Sary an'ny kaonty flickr sama sama – massa
Ny mpanoratra ny blaogy Yek Livan Chayeh Dagh (dite mafana iray kaopy) [amin'ny teny farsi], manipika fa i Iràna , izay tsy manana fahafahana miditra amin'ny ankamaroan'ireo tsenambola iraisam-pirenena, dia tsy dia voakitiky ny krizy ara-bola iraisam-pirenena loatra .
Ny manazava an'io dia ny zavamisy hoe ny hany tokana hifandraisan'i Iràna amin'izao tontolo izao dia fivarotana solitany irery ihany ; nidina ny vidiny saingy mbola tsy nahatratra ny fetra ratsy… Heveriko fa ireo sehatra hahita fahasahiranana indrindra dia ireo izay manome tolotra ho an'ireo mpampiasa vola vaovao sahala amin'ireo orinasa mpanome hevitra amin'ny haitao. Ireo ozinina/orinasa izay mamokatra vokatra fanjifa, toy ny sakafo, dia tsy ho tafiditra ao anaty toe-javatra manahirana.
Manamarika i Iman Brotoseno,  teratany Indonziàna [amin'ny teny bahasa] fa ny ankamaroan'ireo Indoneziana dia tsy voakasiky ny fitontongan'ny tsenambola.
Tsy mahagaga raha iharan'ny krizy ny Tsenambola Indoneziana. Miantraika manokana amin'ny vondrom-piarhamonina an'ireo “mpanana” (ny krizy). Zara raha misy ny fandraisana anjaran'ny Tsenambola amin'ny toekarena indoneziana raha oharina amin'ny orinasan'ny banky sy ny toekarena tena izy. Araka ny voalazan'i Mirza Adhtiyaswara, maherin'ny 60% amin'ny mponina ao Etazonia no mampiasa ny volany amin'ny petra-bola ‘actions’. Etsy ankilany, ao Indonezia, olona 1 tapitrisa monja no mampiasa mivantana ny petra-bola, ary tena vitsy ny olona no mampiasa ny volany amin'ireo trosa na vola miasa misy petra-bola iombonana, ho an'ny vola mitontaly 30 arivo lavitrisa ropia.
Araka ny voalazan'i Tony Abaya, “fitahiana vojimaika ” [amin'ny teny anglisy] ho an'ny firenena ireo tsy fahombiazan'i Filipina tao anatin'ny sehatra fizahantany sy fanondranana.
Tsy dia nijaly loatra tamin'ny fihemorana erantany noho ireo mpifanila vodirindrina aminy ity firenena ity satria tsy afaka nampiroborobo an'ireo fanondranana sy ny asa fizahantany mitovy lenta amin'ny an'ireo mpifanila vodirindrina aminy.
Tena ilaina ireo sehatra roa ireo amin'ny fandrosoan'ireo mpifanila vodirindrina amintsika, ny fikorotsahana erantany tao anatin'ireo sehatra roa ireo no nanakorontana ny toekaren'izy ireo, izay nitarika ny fikatonan'ireo orinasa an'hetsiny sy ny fahaverezan'asa ho an'ireo mpiasa miisa 10 tapitrisa.
Ho famintinana, lasa fitahiana iray vonjimaika ireo tsy fahombiazanay teo amin'ny sehatry ny fanondranana sy ny fizahantany, amin'ny fomba manesoeso,
Izay rehetra mijoro dia hahetry, raha toa nitresaka na nirodana sahala amin'ireny niharan'ny horohorontany manana mari-drefy 6 amin'ny fandrefesana Richter ireny ny toekarena nanaka-danitra voaravaka fahombiazana nananan'ireo mpifanila vodirindrina amintsika, ireo trano tsotra an'i Filipina misy rihana telo kosa dia mbola azo lazaina fa tsy voakitika, hatreto.
Misaotra an'Andriamanitra na Allah, ary koa amin'ireo trapos-ntsika (ireo mpanao politika mahazatra) minia tsy mahalala, mikasika ireo tsy fahombiazantsika.
Arak'i Fatos Lubonja en Albania [amin'ny teny albaney], ny tsy fisian'ireo fitaovana fandrefesana ny krizy dia manazava ny “tsy firaharahiana” asehon'ny mponina manoloana ny krizy erantany.
Gaga aho mahita hoe miresaka kely isika ary amin'ny fomba manafosafo fotsiny ny krizy ara-toekarena erantany ao Albania. […] Mihevitra aho fa ny tena anton'ny tsy firaharahàntsika dia ny tsy fananantsika an'ireo fitaovana izay hahafahantsika mandrefy ny antsoin'ny hafa hoe “krizy” ary koa, amin'ny fomba ankapobeny, tsy manana rafitra isika, izay avy amin'ny vokatra omeny, manondro ny halalin'ny aretina. Ankehitriny ny krizy dia refesina amin'ny isanjaton'ireo fatiantoka eo amin'ny tsenambola, ny tahan'ny tsy fahombiazana amin'ireo orinasa, ny haavon'ny firodanan'ny tsy fahafahana mividy, ireo fanondranana, sy ny sisa… Tsy manana fomba mihitsy isika hahafantarana ny halalin'ireo famantarana ireo.
Dojdlivoe-leto, teratany avy ao Kazakhstan [amin'ny teny rosiana], mahatsiaro fa tsy henjana noho ireo krizin'ny taona 90 ireo olana ara-toekarena ankehitriny ireo.:
Hamid Tehrani  no nandika ireo fitanisàna avy tamin'ny teny farsi. Ny fitanisàna amin'ny teny Bahasa dia nadikan'i Carolina Rumuat . Ny fitanisàna amin'ny teny Albaney nadikan'i Elena Ignatova . Ny fitanisàna amin'ny teny rosiana nadikan'i Adil Nurmakov 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/16/123891/
 ny krizy ara-toekarena erantany: https://fr.globalvoicesonline.org/2009/03/15/4016/
 ‘fidangan'ny vidin'ny trano: https://globalvoicesonline.org/2009/03/18/global-bubbles-bailouts-and-stimulus-plans/
 toekareny tsotra: http://eapblog.worldbank.org/content/laos-economy-less-affected-by-crisis-but-sustaining-growth-a-challenge
 ny toekarena laosiàna: https://fr.globalvoicesonline.org/2009/03/28/5173/
 tsy dia voakitiky ny krizy ara-bola iraisam-pirenena loatra: http://chaay.ghoddusi.com/2009/01/post_955.html
 Iman Brotoseno,: http://blog.imanbrotoseno.com/?p=294
 fitahiana vojimaika: http://acabaya.blogspot.com/2009/03/stability-from-failures.html
 Fatos Lubonja en Albania : http://perpjekja.blogspot.com/2009/03/kriza-boterore-dhe-indiferenca.html
 Dojdlivoe-leto, : http://dojdlivoe-leto.livejournal.com/42160.html
 Carolina Rumuat: https://id.globalvoicesonline.org/author/carol/